Nke a bụ nke a gbara n'anwụ nso-nso a n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii na steeti ahụ dị n'Amawbịa, bụ ebe a nọrọ wee nabata ya bụ nwa amadi.
A nọrọ na mmemme nnabàta ahụ wee gụpụta ihe e dere ede banyere onye ndú ọhụụ ahụ, bụ nke onye na-ahụ maka mmekọrịta ọhanaeze na ndị uwe ojii na steeti ahụ, bụ maazị Haruna Mọhammed bìnyèrè aka na ya, ma bụrụkwa nke e sitere na ya wee kọwàpụtasịa ebe dị iche-iche ọ rụgoro ọrụ, ọtụtụ nkwanye ùgwù o nwetàgòrò na ọkwá dị iche-iche o jìgoro dịka onye ọrụ uwe ojii.
Ya bụ ozi gara n'ihu kọwaa na a mụrụ ya bụ nwa amadi n'abalị iri abụọ na iteghete nke ọnwa Febụwarị ahọ 1962, ọ gụọ akwụkwọ na mahadum Amadu Bello dị na Zarịa, ma bànye n'ọrụ uwe ojii n'abalị iri na ise nke ọnwa March, ahọ 1988, bụkwa nke ọ nọgoro na ya wee nata ọzụzụ na nkuzi dị iche-iche, ma n'ala Nigeria na mba ofesi, ma jiekwa ọtụtụ ọkwa na steeti dị iche-iche n'ala anyị.
Na nzaghachi, maazị Abang fọrọ ekele n'ụkpa wee bunye Chukwu Okike Abịama ma tòkwa onyeisi ndị uwe ojii n'ala anyị, bụ maazị Adamu Mọhammed maka ịhụta ya dịka onye tozùrù òkè iji ya bụ ọkwa dị elu, wee zìtekwa ya na steeti Anambra.
O mere ka a mara na nke ahụ bụ nke ugboro abụọ a na-ezìte ya ọrụ na steeti ahụ dịka onye uwe ojii, ma gosipụtazie ezi olileanya na ọnụnọ ya nke ugbua na steeti ahụ ga-aka mma karịa nke mbụ.
Ọ rụtsịrị aka n'ihe dị iche-iche ọ ga-achụsò n'ọchịchị ya, nke gụnyere imemìlà ohi, mpụ, arụrụ ala, otu nzuzo, na ibugharị akụkọ ụgha na steeti ahụ, ma dọkwazie ndị òtù nzuzo, ndị ohi, na-ebugharị akụkọ ụgha na ndị ọzọ na-etinye aka n'ihe dịka ndị ahụ ka ha sepu aka na nke ahụ, ma ọ bụkwanụ kwakọrọ ngwongwo ha rie mbọmbọ na steeti ahụ, n'ihi na ya ga-abagide n'ibu agha dị égwù megide ha na atụmatụ, iji meee ka steeti ahụ gaa n'ihu ịbụ eji ama àtụ dịka steeti kachara nwee ezi nchekwa na udo n'ala Nigeria dịka ọ dị ugbu a.
Ya bụ nwaafọ Ogoja dị na steeti Cross-River gàrà n'ihu kelee onyeisi uwe ojii nke pụrụ apụ na steeti ahụ nso-nso a, bụ mmazị Danduara Mustapha maka ọrụ ọma ya, ezi ịgba mbọ ya na ihe dị iche-iche o mepùtara na steeti ahụ na nkenke oge ọ nọrọ n'ọkwa, ma kwezie nkwà ịkwàdò na iwukwàsà n'ọmarịcha ntọala ahụ ọ tọgòrò.
Dịka ọ na-ekwe nkwà ijikọ aka ọnụ n'ọrụ, ya na ndị nta akụkọ, òtù dị iche-iche na ọhanaeze; ọ dụkwazịrị ndị òtù ọrụ ya ndị uwe ojii na-ana aka azụ na steeti ahụ, na ndị nke si n'ụzọ mkpukè anapụsị ụmụ mmadụ ego ha tàrà ahụhụ wee kpata, ka ha sepù aka na nke ahụ, maka na ya agaghị anagide ma ọ bụ nabàta ihe dị otu ahụ n'ọchịchị ya, ma sịkwa na ọ ga-etinye amụma dị iche-iche n'ọrụ iji hụ na a nwụchikọrọ ndị na-eme ihe dị otu ahụ, ma nye ha ntaramahụhụ kwesiri ha.